जीवनशैली Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperजीवनशैली Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक नेपालमा स्वास्थ्यका एजेन्डा के कति ?
भारत भ्रमण सकेर काठमाडौँ आइपुगेका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानम गेहब्रेयससले तीन दिनको नेपाल बसाइका बेला उठाउनुपर्ने विषयवस्तु तयार पारिएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बताएका छन् । यो अवसरलाई कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमा भएका कामकारबाहीको समीक्षा गर्न पनि उपयोग गरिने उनले बताए । सहयोगको समीक्षा “नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा डब्ल्यूएचओको लामो समयदेखि योगदान छ […]
डोल्पाको जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीहरुले प्रभावकारी उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । अस्पतालसँग ४० केभीएको जेनेरेटर छ तर जेनेरेजटर चलाउने बजेट अस्पतालसँग छैन । विद्युत भार थाम्न नसक्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राविकरणले अस्पतालमा आउले लाइन लोडसेडिङको सूचीमा राखेको छ । १६ घण्टा सम्मा लोडसेडिङक हुँदा अस्पतालको काममा बाधा भएको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत अखण्ड उपाध्यायले […]
विवाहको निर्णयभन्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
नेपाली समाजमा अझै पनि विना सोचविचार हतारमा विवाह गर्ने र कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन छ । यसो गदौ दाम्पत्य जीवनमा कैयौं समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवनको लयलाई नै अर्कै बनाउने विवाहजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिन किन हामी हतार गर्छौं ? कम उमेरमा विवाह गर्दा यसको अनुभूति नै कमजोर हुन्छ । जसले जीवनलाई नै […]
भूमिहीन, विपन्न किसानलाई मसानघाटको आश्रय
महोत्तरी गौशाला नगरपालिका–८ को सोनी खोल्सीमा केही वर्षअघि मात्र स्थानीयहरू आवतजावत गर्न निकै डराउँथे । वडा नम्बर ८ स्थित कुस्मारी टोल र झोर्लेनी टोलका बासिन्दाहरूको दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ सोनी खोला थियो । जस कारण सो बाटो भएर स्थानीयहरू आवतजावत गर्न डराउँथे । बालुवा नै बालुवाको बगर रहेको मसानघाट अहिले बगैँँचा बनेको छ । स्थानीयले कल्पनै […]
बाँच्नको लागि मिर्गौला बेच्ने गाउँ
हेरात शहर नजिकैको एक अफगानी गाउँ सेन्साइबा बजार एउटामात्र मिर्गौला भएको मानिसको गाउँको रुपमा परिणत भएको छ । यहाँ जीवन धान्नकै लागि आफ्नो एक मिर्गौला बिक्री गरिसकेका मानिसको संख्या धेरै छ । गत वर्ष तालिबान सत्तामा आउनुपूर्व पनि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो थिएन । तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि यो एसियाली राष्ट्रको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको […]
सुन्दरताले आत्माविश्वास र व्यक्तित्वमा निखार ल्याउछ :- वरिष्ठ सौन्दर्यविद् रश्मिला श्रेष्ठ
काठमाडौं,२० माघ । वरिष्ठ सौन्दर्यविद् रश्मिला श्रेष्ठ नेपालको सौन्दर्य ब्यबसाय क्षेत्रको लागि चिर परिचित नाम हो। धादिङमा जन्मिएकी साधारण एवं धैर्यशाली रश्मिला श्रेष्ठ कर्म र संघर्ष मन पराउँछिन् । बाल्यकालदेखि नै सिर्जनात्मक कार्यमा रुचि राख्ने रश्मिला अरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छिन्। बिगत १४ बर्ष देखि सौन्दर्य ब्यबसाय पेशामा बिताईसकेकी रश्मिला सौन्दर्य व्यवसायमा चर्चित छिन। […]
चिसो बढेसँगै हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु पनि देखिन थाल्छन्। समस्या हुनसक्छ हाम्रो मुख वा दाँतमा पनि । चिसो लागेपछि हामीमध्ये कतिपयले मुखको स्वास्थ्यबारे खासै वास्ता गर्दैनौँ । अनि दाँत माझ्दा झन् झनझनाउँछ भन्ने धारणा पनि हामीमा रहेको र दात माझ्न डराउने पनि हुनसक्छौ । बढ्दै गएपछि मुख वरपर विभिन्न ससाना फोकाहरु आएका हुनसक्छन् । त्यसलाई […]
भारतमा सन् २०१९ मा एक तकिया बनाउने कम्पनीले ‘स्लिप इन्र्टसिप’का विभिन्न २० पोस्टको लागि विज्ञापन निकाल्दै आवेदन मागेको थियो । त्यसमा १ दशमलव ७ लाख आवेदन परेको थियो । ‘स्लिप इन्र्टशिप’को क्रममा १०० रातसम्म ९ घण्टा सुत्ने सर्त राखिएको थियो । कम्पनीले यसका लागि प्रत्यर्स इन्टर्नलाई एक लाख रुपैयाँ दिन तयार थियो । विज्ञापन देखेर […]
बरिष्ट सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित नेपालको सौन्दर्य कला क्षेत्रको लागि परिचित नाम हो । बिगत २ दशक भन्दा बढी समय सौन्दर्य क्षेत्रमा बिताई सकेकी सोनी कारंजित सौन्दर्य क्षेत्रमा बिज्ञको रुपमा चर्चित छिन । उनले २० बर्ष अघि बाट रोज शिप बिकाश तालिम केन्द्र रविभवन काठमाडौंको स्थापना गरि ब्यबसायिक रुपमा पार्लर ब्यबसाय सुरु गरेकी थिइन्, अहिले यो […]
काठमाडौं । काखीको छाला शरीरको अन्य स्थानको छालाभन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छ । यो ठाउँको छालाको स्वच्छता र सुरक्षाको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अनुहार र शरीरको बाँकी भाग जस्तै काखीको सुरक्षा र स्वच्छताबारे ध्यान दिनु र यसको हेरचाह महत्वपूर्ण हुन्छ । काखीको छाला हामीले हात माथि उठाउँदाबाहेक अरु समय हातले छोपिएर बसेको […]